USTEVEN SPIELBERG'S MONSTROUS 282 FOOT SUPERYACHT UKWINTENGISO - IIMOTO KUNYE NEERIDES
USteven Spielberg's Monstrous 282 Foot Superyacht UkwiNtengiso
Njengoko ukuthandwa kwee-superyachts kukhula phakathi kwezityebi kunye nodumo, uSteven Spielberg uyehla i-ankile. Inkqubo ye- Imihlathi kwaye Ipaki yeJurassic Umlawuli ubeke i-282 yeenyawo zakhe kwiimarike nge-160 yezigidi zeedola ezipholileyo. Akukho nkcazo inikiweyo ngentengiso, kodwa emva kokuba ngumnini weyacht kangangeminyaka eli-10 kukholelwa ukuba iSpielberg inesikhephe esikhulu nangakumbi. Ngubani onokumsola nyhani? Ngexabiso eliqikelelweyo nge-3.7 yezigidigidi zeedola, ndiqinisekile ukuba i-100 yezigidi zeedola kwenye i-superyacht ayizukuphula i-bhanki.
Isikhephe sikaSpielberg, esaziwa ngokuba ziiLwandle ezisixhenxe, sasisenziwa ngokwakhiwa yindawo yemikhumbi yaseDatshi Oceanco. Ingaphakathi lenziwe ngu UNuvolari kunye noLenard kwaye UMolly Isaksen . Ukuza kufutshane nobukhulu bendlu yaseBeverly Hills, esi silwanyana sineendawo ezine sakha abantu abali-15 ukuya ku-20 nabasebenzi abangama-28. Inesantya esiphezulu sama-19.5 amaqhina (malunga ne-22 mph) ngesantya sokuhamba kwamaqhina ali-15 (malunga ne-17 mph) evumela uluhlu lweemayile ezingama-5,200.
kwimemori yothando katata
Ukuhonjiswa ngaphandle ngeplanga yomthi, isikimu sombala ongathathi hlangothi, kunye neebhodi zomgangatho, iiLwandle ezisixhenxe zinendawo entle kakhulu. Isinyusi seglasi sidibanisa imigangatho emine, ivumela ukufikelela okulula kumagumbi amaninzi ebhodini, kubandakanya indawo eqhelekileyo enebhokisi yezincwadi eyakhelweyo, igumbi lokuhlola, isaloon, kunye negumbi lesetyhula lokutyela elineefestile zeglasi ezisemgangathweni.
Umnini wabucala wabucala uza negumbi lokulala elikhulu, igumbi lokuhlambela elinendawo yokuhlala, isifundo, kunye nebha eneGuinness kwimpompo. Kukho ichibi elikhulu lokuqubha, ii-spas ezimbini, kunye negumbi lokuzilolonga elibandakanya indawo yokuzilolonga, igumbi lokuthambisa, i-sauna, kunye negumbi lomphunga.
Ezinye izinto eziphambili zibandakanya inkqubo yokhuseleko lwekhamera, iyunithi yokukhusela ipirate, kunye nenkqubo ye-smart home enokulawulwa nge-iPad. Kulabo bajonge ukonwabela amanzi, kukho inani leethenda ebhodini, kubandakanya isikhephe semidlalo seenyawo ezingama-31, ithenda ye-limo yeenyawo ezingama-34, Iimbaleki ezintathu zeWave kunye ne-plethora yezixhobo zokuntywila.
Jonga ezinye iifoto zale superyacht inomdla apha ngezantsi.
mens iinwele ezinde ezichetyiweyo
Inamba yebhola z tattoos ezimbini
Bona ngakumbi malunga - IFord Ford GT40 yokugqibela eyakhe yaveliswa isisa kwiFandesi
indlela yokuhombisa iishelufa zangasese
wavuka umvambo kubafana onentsingiselo
Iitattoo zethanga langaphambili kubafana
eyakhelwe edesikeni nakwiikhabhathi